Fitondrana HVM : hampangidy hatrany ny fiainam-bahoaka | Ny Valosoa Vaovao
Fitondrana HVM : hampangidy hatrany ny fiainam-bahoaka
Miha- miakatra hatrany ny hafanana eo amin’ny sehatry ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Toa zary tsy nahy indraindray kanefa koa amin’ny lafiny iray iniana mihitsy ny fahitana azy ny isian’izay toe-draharaha mafana eto amin’ny firenena izay. Amin’ny ankapobeny, raha araka ny mpanara-baovao, dia ny fitondrana mihitsy no rangory fototry ny afo amin’izany, satria miainga avy any aminy hatrany no mahatonga ny hafa, ny olom-pirenena indrindra fa ny mpanohitra hanao hetsika fanoherana na fitsikerana mavaivay. Niantomboka tany amin’ny fanomezan-toky ny vahoaka fa hofoanana ao anaty telo volana monja taorian’ny fianianany ny delestazy. Mandraka ankehitriny anefa tsy voavaha izany fa zary fampanantenana poak’aty. Amin’ny vahoaka tsy te hahalala na « délestage » io na « coupure », fa ny fantany misy hatrany fahatapatahan-jiro hatramin’izao, ary manafintohina azy. Nanao tohivakana taorian’izany ireo fihetsika na fepetra samihafa zary toa mampisendaotra ny maro. Iray tsy hay adinoina amin’izany, ary hipetraka ho tantara ny fikasan’ny fitondrana tamin’ny alalan’ny ministry ny atitany ny hizarazara an’Antananarivo ho kaomina maromaro. Soa fa tsy sahy nampihatra amboletra izany ny fitondrana fa asa izay niafaran’ny raharaha teto. Marobe tsy ho voatanisa eto izay fihetsika sy fepetra mandreraka ny vahoaka izay, fa ny hambara dia zava-misy farany. Iray amin’izany aloha ny fandaniana tamin’ny herinandro lasa nataon’ny ampahany amin’ireo solombavambahoaka ( izay misy miantso azy ho solombavam-pitondrana ankehitriny) ny volavolan’ny lalàm-pifidianana, izay niteraka « afo » midorehitra teo amin’ny samy izy ireo indrindra indrindra, na dia nitazana sy nanaraka amin’ny antsipiriany an’izany aza ny vahoaka, izay manana ny heviny ihany koa momba izany. Efa tsy nahataitra ny maro araka izany intsony ny fihetsiky ny loholona nanara-dia ny teny Tsimbazaza satria efa nampahafantarina azy mialoha tamin’ny alalan’ny fihetsik’ireo depiote nankeny amin’ny HCC Ambohidahy sy teny amin’ny Bianco Ambohibao.
Lafiny politika izay mbola tantara hitohy iny, iray lehibe mbola hampitombo ny maripana amin’ny raharaham-pirenena eto dia ny hiakaran’ny sarandalana ho Ar 700 amin’ny fitateram-bahoaka afaka 15 andro. Ny ho vokatr’izay, hidangana izaitsizy ny sondrobidim-piainana (inflation) manomboka izao hanampy trotraka izay efa notatazan’ny vahoaka sy niainany hatramin’izay. Tsy nitombo mihitsy anefa ny vola niditra tao amin’ny kitapom-bolan’ny isam-pianakaviana tao anatin’izao fitondrana Hvm izao. Hahita ny mangidy mafimafy kokoa noho izay hitany hatrizay ny vahoaka Malagasy. Efa nambara teto amin’ny gazety, fa tsy hisy fihatsaràny izany ny fiainan’ny vahoaka Malagasy amin’ity taona 2018 ity ( GVV ny 14 des 2017). Voaporofo ankehitriny izany vao miditra amin’ny fiandohan’ny volana faha-efatra amin’izao taona 2018 diavina izao. Hamaivay ho an’ny vahoaka araka izany ny lafiny ara-tsosialy amin’izao fotoana izao ary tsy misy antenaina fa tsy hanana vahaolana mahomby sy maharitra hahafaly ny rehetra amin’izany ny fitondrana Rajaonarimampianina. N’inona n’inona ambaran’ny fitondrana, ho fialàna bala izay efa fanaony hatramin’izay izany ary tsy manaiky ho diso mihitsy, dia avy aminy no nahatonga izany rehetra izany. Miharihary koa fa ho fampiesonana sy fampandriana adrisa fotsiny ity resaka fisandratana voizina mafy ity. Ny ankehitriny aloha no hitan’ny vahoaka sy iainany, fa aoka izay ny resaka politika miharo famitahana nisy hatramin’izay.
Visites du jour: 36 822